Daraasad Lasameeyay Oo Lagu Sheegay Haweenka In Ay Aad U Necebyihiin Ragga Basbaaska Cuno (Aqoon Good) - iftineducation.com
iftineducation.com – Daraasad lagu sameeyay ragga inta badan isticmaala Bas-baaska ayaa lagu ogaaday in ay ka badanyahihiin 50% ragga aduunka ku nool ayadoona ujeedooka uu yahay mid ku abaaran dhanka dareenka.
Ragga isticmaala Bas-baaska ayaa ah kuwa xiliga galmada ka gadisan kuwa kale ayadoona haweenka ay aad u necebyihiin ragga inta badan isticmaala bas-baaska sababo badan oo xiliga galmada ay arkeen.
Maria waa 25-sano jir u dhalatay wadanka Sucuudiga waxa ay sheegtay in ay ayada gaar ahaan ay aad u necebtahay ragga ceynkaa oo kale ayadoona sheegtay in ragaasi ay ka kululyihiin dhan walba ragga kale ee anaan isticmaalin basbaaska, waxa ayna intaa ku dartay in biyaha ragga isticmaala basbaaska ay ka kululyihin kuwa kale taa oo ay ku macneysay in ay tahay adeegsiga basbaaska.
Dhanka kale Maria waxa ay sheegtay in dhanka dareenk uu yahay mid aad u macaan badan oo ka macaan badan ragga kale ee aanan isticmaalin basbaaska.
Biyaha ragga isticmaala basbaaska ayaa ah kuwa aad u kulul kana macaan badan kuwa kale waxaana macaantaasi ay tahay mid kumeel gaar ah balse haweenka inta badan ma wada jecla.
Macaansiga xiliyada ciyaarta sariirta gaar ahaan ragga basbaaska isticmaala ayaa ah mid aad u xiisa badan ayadoona raaxada ay ka helaan haweenka lagu sheegay daraasadaan in ay tahay mid ka badan 70% raaxaxa laga helo ragga kale ee anan isticmaalin basbaaska.
Galmada oo la badsado waxey leedahay 7 faa’iido oo muhiim ah